Sida loo sameeyo saacadeeyaha app kalandarka mid sax ah | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Sida loo sameeyo saacadeeyaha app-ka kalenda mid sax ah
Sida loo sameeyo saacadeeyaha app-ka kalenda mid sax ah
Waligaa ma eegtay inta udhaxaysa shanta daqiiqo ee kalandarka wakhtiga soo-dooriyaha appka oo ma ka fikirtay, "Runtii waxaan jeclaan lahaa inaan ballanta dhigo 09:03 oo maya 09:05"
Maya, aniguna (ama qof kale oo aan ahayn nooc ka mid ah cilmi-nafsiga-jilicsan ee xakamaynta). Laakiin taasi macnaheedu maaha inaadan samayn karin. Maanta waxaan arki doonaa sida loo hagaajiyo taayirrada wakhtiga kalandarka si aan u tuso hal-daqiiqo kordhin halkii laga heli lahaa qaybaha shanta daqiiqo ee caadiga ah.
Sida loo dhaqaajiyo saacad-dooriyaha abka-calendar-ka
Caadi ahaan, giraangiraha waqtiga-qaadista waxaa lagu calaamadeeyaa shan daqiiqo oo dheeri ah, taas oo macno samaynaysa maadaama aadan rabin inaad giraangirahaas weligaa ku socoto si aad u gaadho 30. Laakiin haddii aad doorbidayso xallinta daqiiqad kasta, beddelku waa sahlan yahay: Kaliya laba-taabo giraangiraha, ama aagga isla markiiba ku wareegsan giraangiraha, oo arag furaha nambarka. Si taxadar leh u eeg sawirka kore si aad u aragto faraqa u dhexeeya.
Si aad ugu soo noqoto heerka caadiga ah ee shanta daqiiqo ah, mar labaad taabo.
Ma aha oo kaliya barnaamijka Calendar
Khiyaamadani waxay ka shaqeysaa meelo badan oo aad ku isticmaasho istaandarka wakhtiga-dooriyaha iOS. Dhab ahaantii, imtixaankayga waxay u muuqataa inay sii haysanayso xaaladdeeda abka oo dhan. Tusaale ahaan, waxaan u wareegay dooriyaha hal-daqiiqo ah gudaha abka jadwalka caadiga ah, ka dib waxaan bilaabay Fantastical. Markii aan u yeedhay soo-dooriyaha abka taariikheed ee xisbiga saddexaad ee aadka u wanaagsan, waxa ay u hadhsan tahay in loo qaybiyo hal daqiiqo.
Tani aad bay faa'iido u leedahay. Nasiib darro, hal meel ayay ku fashilantay. Waa maxay app-ka laga yaabo inaad rabto inaad xasuusiso ilaa daqiiqada? App-ka Xusuusinta Apple. Laakin abka Xusuus-qorka, ma isticmaali kartid khiyaanadan laba-geesoodka ah si aad ugu beddesho mid-ka-daqiiqad-dooriyaha. Waxaad ku dheggan tahay curyaanka jir shan daqiiqo ah.
Weli, waa khiyaamo weyn marka la heli karo. Isku day mar kasta oo aad wakhtiga dejinayso.
Ku maamul bogag badan oo WordPress ah MyBehmaster – Waa neecaw
BigCommerce - Ganacsiga madax la'aanta ee WordPress